Izidalwa ezithandekayo zesi sibini uKasia noJacek Anyszkiewicz | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UPaul Victor Graner wasizisa kwinyanga yoMnga kunyaka ophelileyo njenge Indalo yonke eyenziweyo ekwakuhlala kuye izidalwa zakhe. Uluhlu lweerhamncwa nganye inezinto zayo ezizodwa, eziboniswe ngendlela ekhethekileyo yomculi oneminyaka eli-15 kuphela.
Izidalwa ezikumgangatho ofanayo nezo zenziwe sesi sibini, uKasia noJacek Anyszkiewicz. Aba babini babelana ngothando olukhulu: Ukwenza oonopopi abamnandi abavela kwilizwe lakho elidaliweyo. Isibini esikudibaniso olugqibeleleyo lokubonelela ngothotho olukhulu lwezidalwa kunye nonodoli abakwaziyo ukuthimba ingqalelo yakho kwangoko ngenxa yomsebenzi wabo omkhulu kunye noyilo.
Inkqubo yoyilo iyaqala entlokweni kaKasia. Nguye ophethe ukuzoba, ukukrola, ukupeyinta kunye nokugqibezela esinye nesinye sezidalwa, ukuze uJacek, njengonjineli wobuchwephesha oqeqeshiweyo, anakekele icandelo lobuchwephesha lokugqibezela unodoli.
Benza zonke ezi zidalwa ukususela ekuqaleni ngezandla zakho ngokusebenzisa ezona zinto zisemgangathweni ophezulu kwaye unike ingqwalaselo eyodwa kwiinkcukacha ezincinci. Oku kuyakwazi ukubamba amehlo kwabo bafumanisa umsebenzi wokubumba waba bazobi babini badibana njengesibini esinomdla oqhelekileyo, ngaphandle kothando abalubizayo.
Iintlobo ngeentlobo zezidalwa ezidlulayo Inkumba evuyayo, bat polar, a porcupine sana, Ufudo ehlathini okanye baby dragon. Ezinye izilo ezikhulu ezidlula kwilizwe likaKasia entlokweni yakhe ukuyila ezi zidalwa zingaqhelekanga nezintle ezinokudlula ngokugqibeleleyo njengabadlali abaphambili komnye wemiboniso kaJim Henson, umyili weMuppets, iFragel Rock okanye iSesame Street.
Unayo iwebhusayithi yakho kusuka esi sixhobo, kunye neefy zakho ezivela le enye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Izidalwa ezincinci eziDlamkileyo zikaKasia noJacek Anyszkiewicz
Inyaniso kukuba ziyamangalisa! Ndiza kujonga iphepha lakho kubuGcisa obuGqwesileyo: =)